Shan khiyaano si looga faa'iideysto Telegram-ka ku shaqeeya Android | Androidsis
Shan khiyaano si aad ugu habeyso Telegram-ka Android
Telegram waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan ee adeegsadayaasha isticmaala Android. Dad badan, waa codsi ugu wanaagsan ee farriinta suuqa maanta. Shaki la'aan, waa barnaamij aad u dhameystiran. Intaa waxaa dheer, waxay u taagan tahay siinta dadka isticmaala fursado badan oo habeyn ah, taas oo u oggolaanaysa iyaga inay wax badan ka helaan.
Sidaa darteed, hoosta waxaan kaaga tagaynaa wadar ah shan tabaha oo kala duwan oo loogu isticmaalo Telegram si ka wanaagsan on casriga ah Android. Si aad sida ugu fiican uga heli karto codsigan farriinta ah. Barnaamij si tartiib tartiib ah u kasbaday joogitaankiisa mahadnaq fursado badan oo ay leedahay, sida xirmooyinkaaga.
1 Ku ilaali fariimaha lambar
2 Tafatir mowduucyada
3 Beddel gidaarka wada hadalka
Ku ilaali fariimaha lambar
Telegram wuxuu had iyo jeer ahaa codsi u istaagay ilaalinta asturnaanta adeegsadayaasha sida ugu macquulsan. Dareenkan, waxay na siinayaan waxoogaa fursado ah markay tahay ilaalinta isticmaalka barnaamijka. Sidaa darteed, waxaan fursad u leenahay qor lambarka sirta ah si aad u ilaaliso sheekooyinkaaga dalabka qaab fudud. Tani waxay noo oggolaaneysaa in qofna uusan heli karin wadahadallada aan la yeelanno ogolaansho la'aan.
Si tan loo sameeyo, waa inaad gashaa goobaha arjiga. Dhexdooda waa inaad gasho qaybta Asturnaanta iyo amniga, halka aan joogno oo leh qayb la yiraahdo Access Code. Waa qeybtaan halka Telegram uu noo ogolaanayo inaan isticmaalno lambar amni ama faro si loo joojiyo sheekaysiga. Muuqaal ay WhatsApp dhowaan ku dareyso sidoo kale.
Telegram wuxuu la yimaadaa mowduucyo taxane ah asalka ahaan arjiga. Laakiin adeegsadayaashu waxay fursad u leeyihiin inay wax ka beddelaan mowduucyadan ama ay iyagu abuuraan. Markaa in muuqaalka codsigu yahay mid la habeyn karo wakhti kasta oo sidaasna loogu isticmaali karo si ka raaxo badan adeegsadaha. Waa geedi socod aan horey kuugu sharaxnay.
Sidan oo kale, midabada baararka xaaladda, qoraallada, ama menusyada ku jira dalabka waa la beddeli karaa. Waa nidaam ay tahay in si taxaddar leh loo sameeyo, laakiin u oggolaan doonta a wax badan oo shakhsiyadeed eeg. Intaa waxaa dheer, sidoo kale waa suurtagal in wax laga beddelo farriimaha ku jira barnaamijka iyo ka dhig kuwo daahfuran.
Beddel gidaarka wada hadalka
Mid ka mid ah astaamaha cusub ee Telegram, kaas oo ku yimid mid ka mid ah wararkeedii ugu dambeeyay. Isticmaalayaasha waxaa la siiyaa suurtagalnimada wax ka beddel darbiga wadahadalka. Marka waa macquul inaad doorato lacag aad rabto inaad isticmaasho. Waa suurtagal in la isticmaalo xulashooyin asal ah oo arjiga laftiisa uu bixiyo, ka soo qaado sawiro maktabadda ama ka raadi sawirro khadka tooska ah. Shaki la'aan, hal talaabo oo dheeri ah oo ku habboon barnaamijka ku saabsan Android.
Si tan loo sameeyo, waa inaad gashaa goobaha arjiga. Goobaha waxaa ku yaal qayb taas oo ah goobaha lagu sheekeysto, meesha ay tahay inaan galno. Dhexdeeda, Telegram wuxuu ina siinayaa dhowr ikhtiyaar. Mid ka mid ah xulashooyinkan ayaa ah in la beddelo asalka sheekaysiga. Marka waxaad dooran kartaa midka aad rabto.
Kanaallada ayaa ka mid ah dhinacyada lagama maarmaanka u ah Telegram. Waxay kuu oggolaanayaan inaad la socotid mawduucyo badan ama aad marin u hesho qaddar aad u tiro badan oo ah qaab fudud. Sidaa darteed, waxay noqon kartaa mid xiiso leh inaad kujirto kanaalka arjiga. Dareenkan, waxaa jira kanaalada qaarkood oo lama huraanka ah, si aad uga faa iideysato. Marka ha ka waaban inaad ku soo biirto iyaga mar uun.
Telegram-ka waxaad ku sameyn kartaa taas haddii aadan isticmaalin barnaamijka muddo dheer, koontadaada si toos ah ayaa loo baabi'in doonaa. Waxaan tan ugu fududayn karnaa barnaamijka. Waxaa lagu gaadhay iyada oo la galo qaybta Asturnaanta iyo Amniga ee goobaha codsiyada. Waa tan qayb ka mid ah is-baabi'inta xisaabta. Dhexdeeda waxaad ku dooran kartaa inta jeer ee aan dooneyno inaan u dhaafno xisaabteenna si otomaatig ah loo baabi'iyo.
Waxay noqon kartaa bil ilaa sanad. Sidaas awgeed waxaan doorannaa wixii noo muuqda oo ku habboon xaaladdaas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Shan khiyaano si aad ugu habeyso Telegram-ka Android
Sida loo wadaago bogagga khariidadaha Google